Home Wararka Puntland: Qiimaha Xildhibaanada lagu iibsado oo caawa cirka isku shareeray
Puntland: Qiimaha Xildhibaanada lagu iibsado oo caawa cirka isku shareeray
Wariyaha u joogo MOL magaalada Garowe ayaa waxa uu soo sheegayaa in sicirka lagu kala iibsado Xildhibaanada uu caawa cirku isku shareeyay. Waxaa cirka sii galayaa sacadba saacadda ka dambaysa sicirka gor gortanka ah ee codadka xildhibaanada Baarlamaanka Puntland halka musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada Puntland ay iyaguna loolan adag ugu jiraan kala ororsiga xildhibaanada Baarlamaanka Puntland.
Musharaxiinta qaarkood ayaa la sheegay in halkii cod ay ku bixinayaan aduun gaarya $50,000 Kun oo Doolar taas oo sare u sii kicisay suuqa kala iibsiga xildhibaanada Baarlamaanka Puntland.
Musharaxiinta dhaqaalaha ugu badan ku bixinaya codadka xildhibaanada ayaa waxaa kamid ah Dr. C/weli Maxamed Cali Gaas oo ah musharax madaxweyne isla markaasna muddo Shan sano ah hogaamiye ka ahaa Puntland, Musharax Maxamuud Khaliif Xasan (Jabiye), Ganacsade Saciid Deni, Gen. Asad Cabdullaahi Cismaan (Diyaano), Ali Farax. Waxa iyagana sidoo kale lacago bixinaya musharixiinta kale.